Olole nadaafadeed oo markale ka bilowday degmada Xamar Jabjab – Radio Muqdisho
Olole nadaafadeed oo markale ka bilowday degmada Xamar Jabjab
Maamulka Degmada Xamar Jabjab oo kaashanaya shacabka Degmada ayaa waxaa uu bilaabay olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda Degmada.
Ololahan nadaafadeed ayaa ah mid lagu nadiifinayo xaafadaha iyo waddooyinka dhexmara degmada, si dib loogu soo bilicda caasimadda, waxaana ka qeyb qaadanayay gaadiidka qashinka ee dowladda hoose, haween iyo dhalinyarada degmada.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Xamar Jabjab Axmed Cabdullaahi Samow ayaa sheegay in ololahan Nadaafadeed uu yahay mid looga hortago in qashinka ay saameyn ku yeeshaan bulshada ku nool degmada, gaar ahaan carruurta, maadaama lagu guda jiro bishii Maarso oo ka mid ah bilaha kuleylaha.
“Sida aad la socotaan waxaa lagu jiraa bilihii kuleylaha, marka waxaan qorsheyney in aan qashinka ka nadiifino xaafadaha, maadaama ay ka dhalan karaan cuduro kala duwan oo ay ka midtahay shuban biyoodka” ayuu yiri Guddomiye ku-xigeenka degmada Xamar Jabjab.
Agaaasime ku-xigeenka Waaxda nadaafadda ee Gobolka Benaadir Xuseen Abtidoon ayaa sheegay in maamulka gobolka uu dhiiri gelinayo ololaha nadaafadeed, isagoo shacabka ku booriyay in si wada jir ah looga qeyb qaato
“Ololahan ayaa ah mid lagu soo celinayo bilicdii ay lahayd caasimadda, runtii waan dhiiri gelineynaa si shacabka ay ka wada qeyb qaataan, waayo inta uu qashinka kuu jiro ayuu cudurkana kuu jiraa, ee aan u wada istaagto ka qeyb qaadashada bilic soo celinta caasimadda” ayuu yiri Agaasime ku-xigeenka Waaxda Nadaafadda.
Degmada Xamar Jabjab ee gobolka Benaadir ayaa dhawaan ku guuleysatay tartankii ku saabsanaa ololaha nadaafadda.
Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Gobolka Hiiraan oo xukunno kala duwan ku riday askar
Wasiiru dowlaha Bay’ada oo heshiis la saxiixday dhigiisa Maasar”SAWIRRO”